Galaal oo sharaxaya shir uu Fidel Castro u qabtay Itoobiya iyo Soomaaliya | Gaaloos.com
Home » News » Galaal oo sharaxaya shir uu Fidel Castro u qabtay Itoobiya iyo Soomaaliya
Galaal oo sharaxaya shir uu Fidel Castro u qabtay Itoobiya iyo Soomaaliya
Dadka reer Cuba ayaa weli ku jira baroordiiq ay u sameynayaan hogaamiyihii hore ee dalkaasi ee geerityooday, Fidel Castro.
Soomaaliya waxay bari ka mid ahayd bah-weynta hanti-wadaaga ee la jaalka ahayd midowgii sofiyeti, hase ahaatee bahweyntii ay is-bahaysiga lahaayeen waxay ku kala boodeen dagaalkii 1977 ee Soomaaliya iyo Itoobiya markii midowgii sofiyeeti iyo xulafadiisii ay la safteen xukuumadii Addis Ababa.
Madaxdii shuuciyiinta oo uu hogaaminayey Fidel Castro oo ahaa hogaamiyihii Cuba ayaa shir isugu geeyey Yaman madaxweynihii Soomaaliya, Moxamed Siyaad Barre iyo Hogaamiyihii Itoobiya Mengistu Haile Marian si loo qaboojiyo dagaalka 2da dal ee jaarka ah.
General Mohamed Nuur Galaal oo ka mid ahaa wafdiga madaxweyne Siyaad ee Yaman tagay ayaa collaadii Soomaaliya iyo Ethiopia iyo halkii uu ku dambeeyey dagaalkii 77 la baxay wuxuu uga waramay Abdinur oo telefoonka Hargeysa ku wareystay.
Wuxuu marka hore waydiiyey shirkii Yaman ku dhexmaray madaxweyne Siyaad iyo Col Mengistu ee uu guddoominayey Fidel Castro.
Title: Galaal oo sharaxaya shir uu Fidel Castro u qabtay Itoobiya iyo Soomaaliya
Posted by galmada Net, Published at 9:15 PM and have 0 comments